“Uyu Ndiye Mwanakomana Wangu”—Baba vaJesu Vakafara Nezvakaitwa Nemwana Wavo
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Krio Kwanyama Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Maya Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tiv Tongan Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
VANA pavanoita zvinhu zvakanaka, vaya vanovatarisira vanofara. Apo musikana anoita chimwe chinhu chakanaka, baba vake vanofara kuudza vamwe kuti: “Uyu mwanasikana wangu.” Kana kuti kana mukomana achiita zvinhu zvakanaka, baba vacho vanofara kutaura kuti: “Uyu mwanakomana wangu.”
Jesu nguva dzose anoita zvinofadza Baba vake. Naizvozvo Baba vake vanodada naye. Uchiri kuyeuka here izvo Baba vaJesu vakaita rimwe zuva apo Jesu akanga ane vateveri vake vatatu?— Hungu, Mwari akataura ari kudenga achivazivisa kuti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu, anodiwa, wandatendera.”—Mateu 17:5.
Jesu anofara nguva dzose kuita zvinhu zvinofadza Baba vake. Unoziva here kuti nei? Nokuti anoda Baba vake zvechokwadi. Kana munhu achiita zvinhu nokuti bedzi anofanira kuzviita, zvinoita sezvakaoma. Asi kana ane chido zviri nyore. Unoziva zvazvinoreva here kuva nechido?— Zvinoreva kunyatsonzwa kuda kuita chimwe chinhu.
Kunyange Jesu asati auya pasi pano, aiva nechido chokuita zvose izvo Baba vake vaimukumbira kuti aite. Aidaro nokuti anoda Baba vake, Jehovha Mwari. Jesu aiva nenzvimbo inoshamisa mudenga naBaba vake. Asi Mwari aiva nebasa rinokosha rokuti Jesu aite. Kuti aite basa iroro, Jesu akabva kudenga. Akaberekwa somwana pasi pano. Jesu aida kuita kudaro nokuti Jehovha aida kuti azviite.
Ngirozi Gabrieri yakaudza Mariya kuti chii?
Kuti aberekwe somwana pasi pano, Jesu aifanira kuva naamai. Unoziva kuti vainzi ani here?— Vainzi Mariya. Jehovha akatumira ngirozi yake Gabrieri kubva kudenga kuzotaura naMariya. Gabrieri akamuudza kuti aizova nomwanakomana. Mwana wacho aizotumidzwa kuti Jesu. Baba vomwana wacho vaizova ani?— Ngirozi yakataura kuti Baba vomwana vaizova Jehovha Mwari. Ndosaka Jesu aizonzi Mwanakomana waMwari.
Unofunga kuti Mariya akanzwa sei pamusoro peizvi?— Akati here, “Handidi kuva amai vaJesu”? Aiwa, Mariya akanga agadzirira kuita zvaidiwa naMwari. Asi Mwanakomana waMwari ari kudenga aizoberekwa sei sorusvava pasi pano? Kuberekwa kwaJesu kwakanga kwakasiyana sei nokuberekwa kwevamwe vana vose? Unoziva here?—
Mwari akasika vabereki vedu vokutanga, Adhamu naEvha, zvokuti vaigona kurara vose nenzira inoshamisa. Pashure paizvozvo mwana aigona kuzotanga kukura mukati medumbu raamai vake. Vanhu vanoti ichi chishamiso! Ndine chokwadi chokuti uchabvumirana nazvo.
Zvino Mwari akaita chimwe chinhu chaitova chishamiso chikuru. Akatora upenyu hwoMwanakomana wake kubva kudenga ndokuhuisa muna Mariya. Mwari akanga asati amboita zvakadaro, uye haana kuzombozviitazve. Zvichitevera chishamiso ichi, Jesu akatanga kukura ari mudumbu raMariya sokukura kunongoita vamwe vana mudumbu raamai vavo. Zvadaro, Mariya akaroorwa naJosefa.
Nguva yokuti Jesu aberekwe payakasvika, Mariya naJosefa vakanga vashanyira guta reBheterehema. Asi rakanga rakazara nevanhu. Pakanga pasina chero imba yokuti Mariya naJosefa vagare, naizvozvo vaitofanira kugara munzvimbo maichengeterwa mhuka. Imomo ndimo makasunungukira Mariya, uye Jesu akaiswa munodyira zvipfuwo, sezvaunogona kuona pano. Umu ndimo munoiswa chikafu chemombe nedzimwe mhuka kuti dzidye.
Nei Jesu ari kuiswa munodyira zvipfuwo?
Zvinhu zvinofadza zvakaitika pausiku hwakazvarwa Jesu. Pedyo neBheterehema, ngirozi yakaenda kune vamwe vafudzi. Yakavaudza kuti Jesu aiva munhu anokosha. Ngirozi yacho yakati: ‘Tarirai! Ndiri kukuudzai mashoko akanaka achafadza vanhu. Nhasi kwaberekwa mumwe munhu achaponesa vanhu.’—Ruka 2:10, 11.
Mashoko akanaka api ayo imwe yengirozi idzi yakaudza vafudzi?
Ngirozi yacho yakaudza vafudzi kuti vaigona kunoona Jesu muBheterehema, akarara munodyira zvipfuwo. Ipapo, dzimwe ngirozi dzaiva kudenga dzakabva dzangobatana nengirozi yokutanga mukurumbidza Mwari. Ngirozi dzakaimba dzichiti ‘Mbiri kuna Mwari,’ “uye pasi pano rugare pakati pevanhu vaanotendera.”—Ruka 2:12-14.
Ngirozi padzakaenda, vafudzi vakaenda kuBheterehema vakanowana Jesu. Ikoko vakataurira Josefa naMariya zvinhu zvakanaka zvose izvo vakanga vanzwa. Ungafungidzira here kuti Mariya akafara sei kuti akanga abvuma kuva amai vaJesu?
Gare gare, Josefa naMariya vakaenda naJesu kuguta reNazareta. Ikoko ndiko kwakakurira Jesu. Paakanga akura, akatanga basa rake guru rokudzidzisa. Iri rakanga riri rimwe basa iro Jehovha Mwari akanga achida kuti Mwanakomana wake aite pasi pano. Jesu akanga achida kuita basa iroro nokuti aida Baba vake vokudenga zvikuru.
Jesu asati atanga basa rake soMudzidzisi Mukuru, akabhabhatidzwa naJohani Mubhabhatidzi muRwizi rwaJodhani. Ipapo chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika! Jesu paakanga ava kubuda mumvura, Jehovha akataura ari kudenga achiti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu, anodiwa, wandatendera.” (Mateu 3:17) Haufari here apo vabereki vako vanokuudza kuti vanokuda?— Tinogona kuva nechokwadi chokuti Jesu akafarawo.
Jesu aigara achiita zvakarurama. Haana kuedzesera kuva zvaakanga asiri. Haana kuudza vanhu kuti aiva Mwari. Ngirozi Gabrieri yakanga yaudza Mariya kuti Jesu aizonzi Mwanakomana waMwari. Jesu pachake akataura kuti aiva Mwanakomana waMwari. Uye haana kuudza vanhu kuti aiziva zvakawanda kupfuura Baba vake. Akati: “Baba vakuru kwandiri.”—Johani 14:28.
Kunyange kudenga, apo Baba vaJesu vakamupa basa rokuita, Jesu akariita. Haana kuti aizoriita asi iye obva aita zvimwe. Aida Baba vake. Naizvozvo aiteerera zvaitaurwa naBaba vake. Apo Jesu akauya pasi pano, akaita izvo Baba vake vokudenga vakanga vamutuma kuzoita. Haana kupedza nguva yake achiita zvimwe zvinhu. Ndosaka Jehovha achifadzwa noMwanakomana wake!
Tinodawo kufadza Jehovha, handitika?— Saka tinofanira kuratidza kuti tinoteerera Mwari zvechokwadi sezvaiita Jesu. Mwari anotaura nesu nomuBhaibheri. Handiti zvaisazova zvakanaka kuedzesera kuteerera Mwari asi tichitenda nokuita zvinhu zvisingapindirani neBhaibheri?— Uye yeuka, tichafara kufadza Jehovha kana tichimuda zvechokwadi.
Zvino chiverenga mamwe magwaro eBhaibheri aya anoratidza zvatinofanira kuziva nokudavira pamusoro paJesu: Mateu 7:21-23; Johani 4:25, 26; na1 Timoti 2:5, 6.
Jesu Achiri Kacheche